The 7 suxuunta caadiga Mexico ee ay tahay inaad isku daydo | Wararka Safarka
Ka hadalka cuntada Mexico waa, ugu horreyntii, ka hadlidda gastronomy lagu tilmaamay inay tahay Dhaxalka Dhaqanka ee aan la taaban karin ee Bani-aadamnimada by UNESCO. Xaaladdan ayaa fikrad kaa siin doonta ahmiyadda iyo hodannimada Mexico marka la eego cuntooyinkeeda iyo sababta aan kuugu keenayno xulkan oo ah 7 cunnooyinka Mexico u gaarka ah oo aadan seegi karin.
Xaqiiqdii, waxaan wajaheynaa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee cunnooyinka adduunka, hadday ahaan lahayd maaddooyinka ay ka kooban tahay iyo hadday tahay kala duwanaanshaha suxuunta. Waxaan dhihi karnaa gobol kasta iyo xitaa magaalo kasta waxay leedahay jiko u gaar ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan kaala hadli doonnaa cuntada caadiga ah ee Mexico si guud, taas oo ah, kuwa cuntada sida caadiga ah looga isticmaalo dalka oo dhan.
1 Cuntada caadiga ah ee Mexico: Waxoogaa taariikhi ah
2 Toddobo saxan oo ka kooban cuntada caadiga ah ee Mexico
2.2 Burritos iyo fajitas
2.3 Mole, nooc kale oo ka mid ah cuntada caadiga ah ee Mexico
2.4 Doofaarka doofaarka
2.5 Escamoles iyo ayax
2.7 Macmacaanka: nacnaca digirta
Cuntada caadiga ah ee Mexico: Waxoogaa taariikhi ah
Gastronomy Mexico ee hada jirta waa natiijada Isku-dhafka ka-hor-Columbian iyo dhaxalka Isbaanishka. Afrika, Aasiya, Bariga Dhexe iyo xitaa saameynta Faransiiska ayaa lagu daray tan. Laga soo bilaabo adduunyadii hore ee Isbaanishka waxay ka qaadatay waxyaabo badan oo ka kooban. Tusaale ahaan, galley, chili, digir, yaanyo, avokado iyo dhir udgoon badan sida papalo, epazote ama caleen barakaysan.
Laakiin dhammaantood waxaa ku soo biiray kuwa ka yimid Yurub sida qamadi, bariis, kafee iyo waliba dhir udgoon sida caleen caleen, kuum, oregano, spearmint ama koryander. Xitaa waxay la yimaadeen Isbaanishka hilibka sida doofaarka ama digaaga y miraha sida liinta, liinta ama mooska.
Sidaan kuu sheegnay, natiijada waxaas oo dhan waa cunno lagu calaamadeeyay kala duwanaanta inta udhaxeysa gobolada kala duwan ee ka kooban wadanka Aztec. Maaha wax isku mid ah in laga hadlo caloosha Baja California in laga hadlo Chiapas lafteeda. Laakiin dhammaan cuntada caadiga ah ee Mexico waxay leedahay saldhig guud. Waxaan dhihi karnaa dhammaantood waxay ku saleysan yihiin maaddooyinka sida galley, chili iyo digir, iyo sidoo kale in qaarkood farsamooyinka cuntada ciyaartaas.
Toddobo saxan oo ka kooban cuntada caadiga ah ee Mexico
Noocyada kaladuwan ee badan ee cuntada laga sameeyo oo ka kooban cunnada reer Mexico ayaa wax aan macquul ahayn nooga dhigaysa inaan ku soo koobno ​​hal maqaal. Sidaa darteed, waxaan diirada saari doonaa toddobada cunno ee caadiga ah ee aad ka heli karto meel kasta oo dalka ka mid ah, laga bilaabo Sonora up Veracruz (waanu kuu ogolaanay halkan hage ah magaaladan) iyo ka Jalisco up Quintana Roo. Sidaa darteed, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa soo jeedinteena gastronomic ee ka timid Mexico.
Wadaadka Tacos del
Waxaa laga yaabaa inay yihiin saxanka ugu caansan ee Mexico, ilaa heer ay ka gudbeen xuduudihiisa maantana laga heli karo meel kasta oo adduunka ah. Aad ayey muhiim ugu yihiin cunnada dalka taas oo dadkeedu abuurtay weedho la sameeyay iyaga la jira. Tusaale ahaan, "tuurista taco" waxay la mid tahay cunista ama "maqnaanshaha jacaylka, qaar ka mid ah tacos al wadaadka."
Si xiiso leh, cuntadaadu ma sahlanaan karin in la diyaariyo. Ku saabsan yahay hadhuudh ama qamadi tortillas gudaheeda lagu daro walax. Oo si hufan ayaa halkan u taal qiimaha tacsida maxaa yeelay, waxay kuxirantahay waxa gudaha ku jira, waxay keenaan noocyo badan oo suxuun ah waxaana la siiyaa magacyo kala duwan. Laakiin laba ka mid ah kuwa ugu caansan waa:
Wadaadka Tacos del. Hore ayaan u soo sheegnay, laakiin hadda waxaan kuu sheegi doonaa waxa ay ka kooban yihiin. Caadi ahaan, buuxintiisa waa hilib doofaar la dubay, in kasta oo ay sidoo kale noqon karto hilib. Marinade Tani waxaa lagu diyaariyey dhir udgoon, achiote iyo basbaas cas dhulka. Basal, cananaaska, iyo koryander ayaa sidoo kale lagu daray, iyo sidoo kale suugooyin kala duwan oo kala duwan.
Tacasyada dahabiga ah. Xaaladdooda, buuxinta waxaa lagu sameeyay hilib digaag la jarjaray, digir iyo baradho. Sidan baa loo shiilay ka dibna jiis baa la daadiyey, saladh iyo suugo waa lagu darayaa. Meelaha qaarkood, waxaa lagu cunaa weheliya maraq kale oo cagaar ah ama maraq digaag ah oo lagu qooyay.
Burritos iyo fajitas
Burritos, classics ka mid ah cuntada caadiga ah ee Mexico
In kasta oo cuntooyinka kale la tixgelin karo, weli waa weli Tacos cufan ee alaabooyin kala duwan. Badanaa waxaa laga sameeyaa noocyo kala duwan oo hilib ah, basbaas, basal iyo basbaas. Intaas waxaa sii dheer, badanaa waxaa la socda digirta la kariyey iyo waxyaabo kale oo la isku qurxiyo.
Waxaan kuu sheegi karnaa isla wixii ku saabsan quesadillas. Waxay sidoo kale yihiin keegag hadhuudh ah, in kasta oo astaamahoodu yahay in farmaajada qayb ka tahay buuxintooda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku dhiirratid inaad isku daydo wax asal ah, weydii mid ka mid ah, marka lagu daro maaddooyinka dhaqanka, xambaarsan ubax bocor.
Mole, nooc kale oo ka mid ah cuntada caadiga ah ee Mexico
Wadanka Aztec, nooc kasta oo maraq ah oo lagu sameeyo basbaas, basbaas iyo dhir kale helo magaca bar. Tan waxaa laga helaa waxa lagu sameeyo avocado iyo khudaartaas. Sida laga yaabo inaad qiyaastay, waan ka hadalnay guacamole, laga yaabee suugada ugu caansan ee lagu yaqaan Mexico ee ka baxsan xuduudaheeda. Xamaasad ahaan, waxaan kuu sheegi doonaa inay dib u bilaabatay waqtiyadii Columbian-ka ka hor, taas oo loogu talagalay dadka Mayan-ka ah, waxay u lahayd astaan ​​erotic ah.
Si kastaba ha noqotee, maalmahan, nooc gaar ah oo suugo ah ayaa loo yaqaan 'mole' oo ay iska leedahay xuquuqda cuntada caadiga ah ee Mexico. Waa midda sidoo kale lagu sameeyo basbaaska basbaaska iyo xawaashyada kale, laakiin waxay leedahay a shukulaato. Dheeraad ahaan, waxaa sidoo kale loo yaqaan hilibka ama khudradda khudradda lagu kariyey maraqan.
In kasta oo gobol kastaa leeyahay cuntadiisa u gaarka ah, haddana waxa loogu qaddariyo gudaha Mexico waa mole poblano. Sidaas caan ah waxay noqotay in, sanad walba, lagu xusaa in Puebla un iidda loogu tala galay maraqan. Waxaa lagu sameeyaa noocyo kala duwan oo ah basbaaska basbaaska, yaanyo, basal, toon, shukulaatada madow iyo dhir udgoon. Haddii aad isku daydo, ma niyad jabi doontid.
Pibil waa eray Mayaan ah oo loo adeegsan jiray tixraac cunto kasta oo lagu diyaariyo a foornada dhulka. Tan waxaa loo yaqaanay bilow waana halka magaca saxankani ka soo jeedo. Asal ahaan, waxay caan ku ahayd Jasiiradda Yucatan, dhul qaali ah meesha waad booqan kartaa waxa aan kugula talinay qodobkaan. Laakiin wuxuu ku faafay dhammaan Mexico iyo xitaa adduunka oo dhan.
Ka kooban hilibka doofaarka lagu kariyey achiote, dhir udgoon oo sidoo kale loo isticmaali jirey waqtiyadii Columbian-ka ka hor. Kadibna waxaa lagu ridayaa foornada dhulka ama wax la mid ah oo ay weheliyaan basasha cas, basbaaska habanero iyo liinta dhanaan. Waxaas oo dhan waxaa lagu duubay caleemo muus ah si looga ilaaliyo in ay qalalaan waxaana loo daayay in la kariyo habeenkii.
Caqli ahaan, saxankan mar dambe looma sameynin qaab dhaqameed oo kale, laakiin wali waa sida macaan. Suugada, achiote kaliya ma faragalin, oregano, kuumin, saliid saytuun, khal iyo casiirka liin dhanaanta laftiisa ayaa sidoo kale lagu daray.
Escamoles iyo ayax
Waxaan ku darnaa cunnadan cunnada caadiga ah ee Mexico maxaa yeelay waa qayb ka mid ah, laakiin waxaan kaaga digeynaa, laga yaabee, inaadan rabin inaad tijaabiso. Sababta ayaa ah mid aad u fudud. Escamoles waa dirxiga dixirka dixirka kuwaas oo lagu cuno wadanka Aztec ilaa waqtiyadii kahor Columbian-ka. Haddii aan kuu sheegno in iyagana la yiraahdo "Caviar ee Mexico", waxaad ka heli kartaa fikrad ah sida loo qaddariyo. Badanaa waxaa la cunaa shiilan waxaana weheliya ukumo iyo dhir udgoon sida epazote.
Dhinaceeda, waxaannu kuu sheegi karnaa isla wixii ku saabsan cawska. Ku saabsan yahay fiiq yar Waxaa sidoo kale loo cunaa shiilan, xitaa sida aperitif ama tacos iyo quesadillas. Sikastaba xaalku ha ahaadee, labadaba waxaa lagugula talinayaa inaad ku dhiirato.
Tani xoog leh beerta Waxaa ka mid ah, marka lagu daro maraqa, iniinyaha hadhuudhka ee noocyada 'cacahuazintle', digaag ama hilib doofaar iyo waxyaabo kale oo badan. Kuwaas waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, basal, salaar, kaabajka, dabocase, avokado, jiis ama digaagga doofaarka.
Waana inaad adigu is heli karto noocyo badan oo pozole ah. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waxay u kala baxaan laba qaybood: the Blanco, ka fudud sababtoo ah waxay leedahay oo keliya hadhuudh iyo hilib iyo basbaas, aad u faahfaahsan taasna waxay yeelan kartaa dhadhan aad u basbaas badan.
Waa inaan sidoo kale raadinaa asalkiisa waqtiyadii Hispanic-ka kahor. Xaqiiqdii, magaceedu wuxuu ka yimid Nahuatl tlapozonalli, oo macnaheedu yahay "la kariyey" ama "dhalaalaya", in kasta oo aragtiyo kale tilmaamayaan in magaceeda lagu leeyahay posoli, erey ka yimid luqadda Cahita oo loo turjumi karo "galley karinta."
Macmacaanka: nacnaca digirta
Ma dhammayn karno booqashadeenna cunnada caadiga ah ee Mexico iyadoo aan laga hadlin macmacaanka. Qaarkood waxay ku beegan yihiin kuwa aan ku naqaanno dalkeenna. Maaha wax aan micno lahayn, waxaan horay u sheegnay in cunnada Mexico ay leedahay qayb xoog leh oo Isbaanish ah. Waa kiiska churros, Cunto bariisah friters ama jericallas, oo la mid ah kabadkeena.
Si kastaba ha noqotee, macmacaannada kale waa kuwo asal ahaan asal ahaan ka soo jeeda. Mid ka mid ah ayaa ah nacnac digir ah, badeecad sidaas kujirta caloosha caloosha wadanka Aztec. Waxaa lagu sameeyaa caano, jaallo ah, qorfaha, sonkorta, yicibta la jajabiyey, iniinta iyo galleyda, marka lagu daro, si macquul ah ayaa looga soo qaadaa digirta loo kariyey cusbo la'aan.
Laakiin iyaguna aad ayey caan u yihiin kabaalleyda, nooc keeg ah oo lagu diyaariyey biyo, malab, looska aan cusbada iyo subagga. Waxaan kuu sheegi karnaa isla wixii ku saabsan dheecaan madow, oo saldhigeedu yahay midhaha geedka loo yaqaan oo ay weheliyaan ukumo, qorfe iyo sonkor ay ka mid yihiin maaddooyin kale. Dhadhankiisu waa mid aad u xiiso badan, oo la yaab leh oo la mid ah kan shukulaatada. Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa rootida galleyda ama hadhuudh cusub oo dul saaran. Si aad u macaaneyso, waxay leedahay caano isku dhafan iyo qorfe iyo waxyaabo kale sida ukunta, subagga iyo bur. Si fudud u macaan.
Gabagabadii, waxaan kuu sheegnay ilaa toddobo suxuun oo ka kooban waxyaabaha ugu muhiimsan cuntada caadiga ah ee Mexico. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku dari lahayn kuwa kale sida maraq liin dhanaan, dadka caanka ah tamaleah Chips tortilla ama marquesitas. Hore u soco oo iskuday iyaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » 7 suxuunta caadiga ah ee Mexico oo ay tahay inaad isku daydo
9 filim oo la daawado ka hor intaadan aadin Rome